MINISITRA RABESA ZAFERA ANTOINE : « Vonona hanohy ny asa raha ilaina »
Tsy vitsy amin’ ireo mpikambana amin’ny governemanta no maniry hiverina amin’ny toerana maha minisitra azy. 7 novembre 2011
Miova anefa tsy tahaka ny mahazatra ny fanendrena minisitra amin’ity governemanta iraisana ity, ka apetraka amin’ny fahendren’ny Praiminisitra ny fanendrena minisitra hitantana ny minisitera avy, hoy ny profesora Rabesa Zafera Antoine, raha nitafa tamin’ny mpanao gazety ny tenany ny zoma 05 novambra teo.
Nitsotra anefa ity farany fa « Mbola vonona hanohy ny asany, raha toa ka mbola misy ilan’ny firenena izany. Tsy mifidy anefa izy fa na mbola ny minisitera nisy azy teo aloha no anendrena azy na koa toeran-kafa dia vonona hatrany ny tenany. Ny hanasoa an’i Madagasikara no tanjona, indrindra ny ho avin’ny tanora liam-pivoarana sy fianarana. », hoy ihany ity minisitry ny Fampianarana Ambony teo aloha ity nandritra ny fihaonany tamin’ny mpanao gazety. Raha tsiahivina dia ny fiaraha-miasa amin’ny governemanta iombonana izay no nokendrena tamin’ny fotoana nanendrena azy kanjo araka ny niaraha-nahalala ireny fa tsy nandray anjara tamin’izany ny ankolafy sasany, ka dia izao niafara amin’izao fanaovan-tsonia heverina fa hivoahana amin’ny krizy izao.
Manoloana izany anefa, hoy ihany izy, dia tokony samy hijery ny tombontsoam-pirenena ny tsirairay fa tsy izay ho an’olom-bitsy sy ny tena ihany. Raha samy tonga saina amin’izany tokoa ny rehetra sy ireo tompon’andraikitra isanisany dia mety ho mora kokoa ny fialana amin’ity krizy ity.